Daldala daangaan irraafi qajeelfama wixinee akkaataa hojii seera qabeessaan nii uuma jedhameeqophaa’ee – ዜና ከምንጩ
Daldala daangaan irraafii qajeelfama wixinee akkaataa hojii seera qabeessaan nii uuma jedhameeqophaa’ee ministeera Daldalaafi walitti hidhama waliiniifiqophaa’ee yaadaa qooda fudhattoota eegaa jiraachuun ibsame.
Waajjirri ministeericha kanaan dura daldala kanaan dura hidhata seeraa tokko malee deemuu gara boqonnaa haaraatti kan ceesiisuudha jedhee itti amanee qaama qoodafudhataa kan ta’e komishinnigumuruukiifeerguu isaa beeksiseera.
Wixineen kun kan qophaa’e bara 1994tti biyyaaleen 16n hundeeffamee yaroo ammaa biyyaaleen miseensa 21 kan qabu daldalaa waliinii biyyaaleen Afrikaabahaafiikibbaaf kan jedhuun kan hundeeffame sanada sirna daldalaa 2010 bahee raawwachiisuudhaafqophaa’eedha.
Sirni daldalaa si’ataa kun dhimmoolee kan akka Ashura irraa jalqabee galttewwaniidaldalaafi dhiyaatan adda baasuudhaan akka ka’u eerameera. DabalataanisDaldaltonni daangaan irraa fageenya ammamii seenanii daldaluu danda’u isa jadhu kan ka’uudha.
Sirni daldalaa dhalattoota daangaan irra jiranii seera dhabeessa kan ta’ee sirnnichii kan itti gaggeeffamuseerrika’ame waan hinjirreef ta’u ibsu .’’Daldalaan daangaan irra jiru hundi gara magaalota gidduutti sitehojjachuudhaan homisha dhiyeessuuhindandeenye.Sababiin isaa kontiroobaandiijedhamee ijaa fudhatamu kunis daldalaa tilmaama keessa kan hin galchineemiti’’jachuudhaan Togo Wucaaleetti daldalaa kan ta’an Farhaan Ahimad Addis Maaladaatti himaniiru.
Kanaan dura daldallii daangaan irraa baliinaammamiin kan jedhuun wantiika’amef hinjiru.amma doolaara meeqaan Daldalaafi bittaa gaggeessuu akka danda’amuswantika’ame hinjiru. Humni bituu birrii keenyaa gad bu’u isaatiin biyyaaleen ollaa wajjin kanaan dura birrii biyyaaleelaachuunfayyadamaa tureera amma garuu walitti hidhamnni daldalaa Somaalee wajjin jiruu akka isaan yaachisuFarhaan dubbataniiru.
Qaamooleen wixinichi isaan ilaallatuerga irratti mari’atanii booda fooyyessi itti taasifamuu akka qabuu xumura irrattis karaa ministeera hajaa alaa biyyaaleen ollaaf dhiyaateergii irratti mari’atamee booda akka ragga’u ministeera Daldalaafi walitti hidhama damiichattidaayireektaraDaldalaafi maree isaa GabratsaadiqXaaseew Addis Maaladaatti himaniiru.
Komishinarakomishiiniigumuruuk Dabalee Qaabataa gama isaaniitiin seerri daldalaa dhalattoota daangaan irraaqophaa’uun isaa walitti hidhama biyyaaleen waliin jiruu akka cimsuu dubbataniiru. Daldalakontiroobaandiito’aachudhaafis haala gaarii uuma gara fula duratti waajjiraministeericha wajjiin walitti dhiyeenyanhojjenna jadhaniiru
Wixineenqophaa’ee humna daldala ittisuu uumuu isaa irra daldala baasiifi galii biyyaatti kan itti beekanudha kan jedhan Gabratsaadiqseeriichii yammu ragga’uDaldaltonni mirga isaanii fayadamanii bilisummaa hojjechuu qabuu.jadhaniiru
Akkaataan hojii amma jiru daldalii daangaan irraa Kessumaa karaa Keenyaa sanada tokkoon malee amma doolaara 2000 akka kan hayyamamu yoo ta’es maree daldaltoota waliin taasifamuun gara doolaara 5000tti akka guddatudaldaltoota magaalaa Moyyaaleettigaaffiin akka dhiyaateGabratsaadiq Addis Maaladaa hubachiisaniiru.
Biyyaalee shan Itiyoophiyaa waliin walitti dhufeenya daldalaa qaban keessaa tokko Keeniya yammu taaturakkooweerarakooviidiin dura shaqaxa doolaara miliyoona 75 ta’u gara Itiyoophiyaatti eergiteetti.Haaluma walfakkaatuun Itiyoophiyaan gara Keeniiyaatti bara 2009 tti daldala alaa miliyoona 57 ta’u akka raawwatee ragaan nii agarsiisa.
Qophaa’uun wixiniichaa waan gaarii ta’u isaa yuuniivarsiitii new janareeshinii barsiisaaquunnamtii qorannaa idiiladdunyaa Dr UrgeessaaDheeressaa eeraniiru.Wixiinichii gara hojiitti yammu galu walitti hidhama gabaa biyyaaleen giddu jiru cimsuutti dabalee hojii seeraan alaafi qisaasama humna seeraan alaa itisuudhaaf gargaarra jachuudhaan ibsaniiru.
Bariisiichi itti dabalaniis sababiin hiri’inna sharafa alaa hanquu gabaa mudatu maallaqabiyyaalee oolaa fayyadamuudhaan hiri’inicha sirreessuun nii danda’ama.jadhaniiru.
Total views : 6982814